खुला ठाउँमा दिसा गरेको सूचना दिनेले पाउने भयो यस्तो पुरस्कार ! | suryakhabar.com
Home विचित्र संसार खुला ठाउँमा दिसा गरेको सूचना दिनेले पाउने भयो यस्तो पुरस्कार !
on: २९ जेष्ठ २०७५, मंगलवार १३:२३ In: विचित्र संसारTags: No Comments
वीरगञ्ज । छिपहर माई गाउँपालिका वडा नं ५ ले वडा सरसफाइसम्बन्धी १३ बुँदे आचारसंहिता जारी गर्दै खुला ठाउँमा दिसा गरेको सूचना दिने व्यक्तिलाई रु २५० पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ ।
‘हिमवत्खण्ड कला साहित्य सम्मिलन’ हुदैँ
२९ जेष्ठ २०७५, मंगलवार १३:२३